Sajhasabal.com | Homeउदयपुरको नदि कटान नियन्त्रणका लागि करिब सात अरवको योजना
उदयपुरको नदि कटान नियन्त्रणका लागि करिब सात अरवको योजना
अजयकुमार साह/चैत २४, उदयपुर । उदयपुरको पूर्वि भेगमा भईरहेको अत्यधिक नदि कटान नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपतिबाटै कदम चालिने भएको छ ।
त्यस्तै नदि कटान नियन्त्रणका लागि अरबौं बजेट लगानी गरिने बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार उदयपुरको त्रियुगा नदी कटान क्षेत्रको हेलीकप्टरबाट अवलोकन गरी कटानलाई नियन्त्रणमा लिन विशेष योजना सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ ।
नदि कटान क्षेत्रको प्रत्यक्ष अवलोकन पछि चौदण्डीगडी नगरपालिका वडा नं. ५ सिवाईमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्र देखि उदयपुरको अधिकाँश पूर्वि भाग सप्तकोशी देखी सुनसरीको चतरा त्यस्तै उदयपुरको चौदण्डीगडी नगरपालिका सम्मको नदि कटान क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको छ ।
चतरादेखि चौदण्डीगडी ४२ किलोमिटर माथि त्रियुगा नगरपालिकाको होक्से कालिखोलासम्मको भागमा अत्याधिक कटान भई धनजनको क्षती हुदै आएको छ ।
उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै उहाँले हेलिकेप्टरबाट कटान क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभयो । उहाँले जनधनको सुरक्षा र विकास निर्माणको निमित्त विशेष चासो राख्दै ठूलो मात्रामा भईरहेको नदी कटानलाई रोक्न विशेष योजनासहितको कार्यक्रम सन्चालन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गनुभयो । यस समस्याप्रति पहिलेदेखि नै आफु जानकार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आफु समस्या हलको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको, त्यसमा सांसदहरुको उत्तिकै साथ र जनताको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जलउत्पन्न प्रकोप ब्यवस्थापन डिभिजन नं. ४ का प्रमूख रामनरेश मण्डलले सात अरब लागतको नदि कटान नियन्त्रण गुरु योजना निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । नदि कटान नियन्त्रण भएमा ४ सय हेक्टर जग्गा उकास हुने, १० हजार बढी घरधुरी र लाखौं जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नदीको दुबै किनारमा पाँचमिटरको सडकसहितको ड्याम निर्माण गरि विकासमा तिब्रता दिईने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वागत गर्दै सांसद डाक्टर नारायण खड्का र मञ्जकुमारी चौधरीले विकास र जनप्रेमी राष्ट्रपतिलाई उदयपुरमा पाउनु उदयपुरबासीको गौरबको विषय भएको बताउनु भयो । प्रमूख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले नदी कटानको समस्याको बारेमा जानकारी राख्दै कटान नियन्त्रण हुने वित्तिकै विकासले ठूलो फड्को मार्ने बताउनुभयो । उच्च सुरक्षाकाबीच भएको कार्यक्रममा सुरक्षा प्रमूखहरु, कार्यालय प्रमूख, पत्रकार तथा नागरिकसमाजको बाक्लो उपस्थिति थियो ।